Kutheni le nto ukuThengiswa kweMpembelelo kunokuba sisiCwangciso sakho esilandelayo | Martech Zone
Kutheni le nto ukuThengiswa kweMpembelelo kunokuba sisiCwangciso sakho esilandelayo
NgeCawa, ngoMatshi 29, 2015 NgoLwesine, uJuni 18, 2015 Douglas Karr
Xa ndithetha nge ukuthengisa okunempembelelo kwiNtengiso yeNtlalontle yeHlabathi yezeNtlalontle, ndachukunyiswa yimfuno kunye nengxoxo eqhubekayo endandinayo neenkampani ezininzi kwinkomfa yonke. Ndinegumbi eligcweleyo kwaye bendinabantu abaninzi abandilandelayo ngaphandle kwenkcazo yeminye imibuzo emva kweseshoni.
I babelane rap ividiyo leyo Rappitt yenzelwe mna-ngoku efikelele kubaphulaphuli ababanzi kakhulu ngaphandle kokufuna ukundibuyekeza njengomphembeleli kuba ujolise kum wandenzela ividiyo. Ndithethile malunga nokuphuhlisa amabali kunye nezicwangciso zokuqinisekisa impumelelo kunye nefuthe kunye nokuphuma xa bengasebenzi. Kwaye ndinike ingxelo ngokubalisa amabali eya kuthi incede umntu oza kuphembelela ukuba athethe ngcono malunga nemveliso okanye inkonzo onqwenela ukuba babelane ngayo.
Amanqaku afana nokuThengiswa kwe-Influencer kuba inokusebenza ngeenjongo ezahlukeneyo (ukongeza kwinjongo ebonakalayo, ukonyusa intengiso): isikhundla sephepha, ukubhengeza, ukuthembeka kwabathengi, isizukulwana se-UGC, ukukhula kumajelo entlalontle, umxholo wentsholongwane, kunye nokunye. Abathengi enjengayo kuba ucaca zokwenene ngakumbi. Yaziswa ngexesha elifanelekileyo. Xa umthengi ebrawuza ibhlog malunga nokuhonjiswa kwasekhaya… lelo lixesha elifanelekileyo lokuba ubonise ikhonkco kweso sihlalo se-Eames (uphawu lwakho lwangoku), nalo lubonakalisiwe ngaphakathi komxholo wempembelelo ethembekileyo yekhaya. Le ndlela yokujonga imeko isebenza ngakumbi kunokuba ubathumelele i-imeyile ye-spam kuqala ekuseni… kanye xa besiya emsebenzini.
Umba ophambili wokufumana impembelelo ayisiyongxaki yempembelelo kunye nokufikelela okanye ukuthandwa. Ukulandela okukhulu akuthethi ukuba abaphulaphuli okanye abahlali baya kugxalathelana ukuya kuthenga imveliso okanye inkonzo yakho. Ngapha koko, ngelixa uninzi lwabantu ababizwa ngokuba ngabaphembeleli benokuthandwa okumangalisayo- oko akuthethi ukuba banokuba nefuthe kwindlela yokuziphatha yokuthenga kwabo babalandelayo.
Kunyanzelekile ukuba ufumane umntu ophethe abaphulaphuli abanesakhono sokungakhuthazi imveliso okanye inkonzo yakho kuphela - kodwa ukurhwebesha abalandeli kwaye ubakhokelele kwishishini lakho apho ungabaguqula khona. Impembelelo ayithengisi, igama elithi ifuthe ngokoqobo livela kwigama Ukuhamba. Umsebenzi wempembelelo kukuhambisa ukuhamba kwakho ukuze usebenzise ukuthembela kunye negunya esele liphuhlisiwe kwaye liphembelele njengelakho.
Ishelf iphuhlise le infographic kwaye yimpembelelo yeqonga lokuthengisa ukuchonga nokunxibelelana nabaphembeleli kunye nokulinganisa impumelelo yamaphulo awenziweyo.
tags: ukuthengisa okunempembeleloiqhinga lokuthengisa elinempembeleloishelfu
IStatDragon: Uhlalutyo oluphambili lweVimeo
Iindlela ezi-6 ezilula zokuPhucula umxholo wakho weNtengiso